सर्वश्रेष्ठ टेस्टोस्टेरोन Isocapronate पाउडर निर्माता कारखाना
/ उत्पादन / टेस्टोस्टेरोन / टेस्टोस्टेरोन Isocapronate पाउडर
दर्जा: SKU: 15262-86-9. श्रेणी: टेस्टोस्टेरोन
AASraw टेस्टोस्टेरोन Isocapronate पाउडर को पेशेवर निर्माता हो जसको समर्थन को रूप मा स्वतन्त्र प्रयोगशाला र ठूलो कारखाना छ, सबै उत्पादन CGMP नियमन र ट्रयाक योग्य गुणस्तर नियन्त्रण प्रणाली अन्तर्गत गरिनेछ। आपूर्ति प्रणाली स्थिर छ, दुबै खुद्रा र थोक आदेश स्वीकार्य छन्।
टेस्टोस्टेरोन इस्स्कोप पाउडर भिडियो
टेस्टोस्टेरोन इस्स्कोप पाउडर आधारभूत क्यारेक्टरहरू
उत्पादन नाम: टेस्टोस्टेरोन आइकोप्रोट पाउडर
CAS नम्बर: 15262-86-9
आणविक वजन: 386.576 जी / mol
पिघल प्वाइन्ट: 188.6 ° C
टेस्टोस्टेरोन Isocaproate पाउडर
टेस्टोस्टेरोन आइसोकाप्रोएट एक एनाबोलिक हार्मोन हो जसले मांसपेशी, हड्डी र यौन अंगहरूको विकासलाई नियमन गर्दछ। यद्यपि यो पुरुषको वृद्धि र धेरै मर्दाना विशेषताहरूको लागि आवश्यक छ, यो महिलाहरूमा धेरै तल्लो तहमा पनि पाइन्छ। टेस्टोस्टेरोनको स्तर किशोरावस्थामा बढ्छ, त्यसपछि प्रारम्भिक वयस्कता पछि घट्न थाल्छ। हाइपोगोनाडिज्म, वा टेस्टोस्टेरोनको धेरै कम स्तरले सामान्यतया पुरुषहरूलाई असर गर्छ, तर महिलाहरू पनि यस अवस्थाबाट पीडित हुन सक्छन्। कम टेस्टोस्टेरोन कम मांसपेशी मास, कम कामवासना, र हृदय रोग को ठूलो जोखिम संग जोडिएको छ। यसको कारणले गर्दा, टेस्टोस्टेरोन आइसोकाप्रोएट बढाउनका लागि धेरै फाइदाहरू छन्।
शरीरमा यसको धेरै कार्यहरू मध्ये, टेस्टोस्टेरोन आइसोकाप्रोएटले रातो रक्त कोशिका उत्पादनलाई उत्तेजित गर्दछ, जसले मांसपेशी र अंगहरूलाई अक्सिजन प्रदान गर्न मद्दत गर्दछ। जबकि धेरै रातो रक्त कोशिकाहरूले आफ्नै जोखिमहरू खडा गर्न सक्छन्, असामान्य रूपमा कम मात्रा, वा एनीमियाले अंग क्षति वा अन्य स्वास्थ्य समस्याहरू निम्त्याउन सक्छ। अध्ययनले पत्ता लगाएको छ कि टेस्टोस्टेरोन आइसोकाप्रोएट थेरापीले एनीमियालाई ठीक गर्न मद्दत गर्न सक्छ।
टेस्टोस्टेरोन आइसोकाप्रोएट थेरापी जस्तै प्राकृतिक हर्मोन प्रतिस्थापनले पनि हड्डी-खनिज घनत्व बढाउन पाइन्छ। हड्डीको घनत्व उमेर बढ्दै जाँदा ओस्टियोपोरोसिसको जोखिम बढ्छ। तपाईंको टेस्टोस्टेरोन आइसोकाप्रोएट बढाएर तपाईंको हड्डीहरूलाई बलियो बनाउन सक्छ, जसले तपाईंको अंगहरूको संरचना र सुरक्षा पनि प्रदान गर्दछ।
त्यहाँ एक कारण छ कि स्टेरोइडहरू सामान्यतया एथलीटहरू बीच लोकप्रिय छन्। टेस्टोस्टेरोन आइसोकाप्रोएट एक प्राकृतिक रूपमा हुने स्टेरोइड हो जसले मांसपेशी मास बढाउन र कायम राख्न सक्छ। पछि, यसले थप उर्जा र बोसोको मात्रा घटाउँछ। नियमित शक्ति प्रशिक्षण कार्यक्रम लागू गर्नाले फाइदाहरू बढाउन सक्छ, किनकि यसले स्वाभाविक रूपमा टेस्टोस्टेरोन स्तरहरू बढाउने काम गर्दछ। यसले थप उत्पादक व्यायामहरूमा योगदान पुर्‍याउँछ जसले थप स्वास्थ्य लाभहरू लिन सक्छ।
एक स्वस्थ शरीर मास र सुधारिएको ऊर्जा स्तरले तपाईंको मानसिक स्वास्थ्यमा पनि सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ। हाइपोगोनाडिज्म सामान्यतया थकान, कामवासनाको कमी, र प्रमुख अवसादका लक्षणहरू द्वारा विशेषता हो। अध्ययनहरूले पत्ता लगाएको छ कि टेस्टोस्टेरोन आइसोकाप्रोएट थेरापी उपचारले यी लक्षणहरूलाई कम गर्यो, र यो एक प्रभावकारी एन्टी-डिप्रेसन्ट उपचार पनि हुन सक्छ।
तपाईको मानसिक स्वास्थ्य र समग्र मूडको अतिरिक्त, टेस्टोस्टेरोन आइसोकाप्रोएटले अन्य तरिकामा मस्तिष्कलाई फाइदा पुर्याउन सक्छ। अध्ययनहरूले टेस्टोस्टेरोनको उच्च स्तर र अल्जाइमर रोगको कम जोखिम बीचको सम्बन्ध फेला पारेको छ। उच्च टेस्टोस्टेरोन Isocaproate एकाग्रताले पनि सुधारिएको मेमोरी र संज्ञानात्मक कार्यमा योगदान दिन सक्छ, स्थानिय क्षमताहरू सहित।
यद्यपि अध्ययनहरू जारी छन्, प्रमाणले सुझाव दिन्छ कि टेस्टोस्टेरोन आइसोकाप्रोएटले निश्चित हृदय रोगहरूको उपचार र रोकथाम गर्न मद्दत गर्न सक्छ। कम टेस्टोस्टेरोन स्तर सामान्यतया हृदय रोग को एक ठूलो जोखिम संग सम्बन्धित छ। यो हुन सक्छ किनभने अन्य कारकहरू, जस्तै मोटापा, टेस्टोस्टेरोनको तल्लो स्तरसँग पनि जोडिएको छ। यद्यपि, अन्वेषकहरूले हाल हृदय स्वास्थ्यमा टेस्टोस्टेरोन आइसोकाप्रोएट थेरापीको प्रभावहरू पुष्टि गर्ने प्रयास गरिरहेका छन्।
टेस्टोस्टेरोन आइसोकाप्रोएट बढाउनको लागि धेरै फाइदाहरू भए तापनि, कुनै पनि प्रतिकूल प्रभावहरूबाट बच्नको लागि खुराक सुरक्षित छ भनेर सुनिश्चित गर्न महत्त्वपूर्ण छ। जेल, छालाको प्याचहरू, र इंजेक्शनहरूको अतिरिक्त, त्यहाँ धेरै टेस्टोस्टेरोन आइसोकाप्रोएट संवर्द्धनहरू उपलब्ध छन्, क्रिएटिन पूरकहरू सहित, जसलाई प्रिस्क्रिप्शन आवश्यक पर्दैन। केही खानेकुरा र भिटामिनहरूले पनि भिटामिन डी, जस्ता, टुना, र अण्डाहरू सहित तपाईंको टेस्टोस्टेरोन स्तरलाई स्वाभाविक रूपमा बढाउन मद्दत गर्न सक्छ। सामान्यतया, एक समझदार आहार र आधारभूत शक्ति प्रशिक्षण व्यवस्थाले तपाईंलाई टेस्टोस्टेरोन आइसोकाप्रोएटको स्वस्थ मात्रा बढाउन र कायम राख्न मद्दत गर्दछ। यद्यपि, यदि तपाईंलाई हाइपोगोनाडिज्मको शंका छ भने, टेस्टोस्टेरोन आइसोकाप्रोएट थेरापी उपचारको बारेमा आफ्नो डाक्टरसँग कुरा गर्नुहोस्।
टेस्टोस्टेरोन Isocaproate पाउडर लाभ
टेस्टोस्टेरोन Isocaproate रातो रक्त कोशिकाहरूको उत्पादनमा यसको भूमिकाको कारण दैनिक ऊर्जा स्तरहरूमा महत्त्वपूर्ण कारक हो। यी अत्यावश्यक कोशिकाहरूले शरीरलाई अक्सिजन प्रदान गर्छन् र बोसो र कार्बोहाइड्रेटलाई ऊर्जामा रूपान्तरण गर्न मद्दत गर्छन्। नतिजाको रूपमा, कम टेस्टोस्टेरोन भएका पुरुषहरू चरम मानसिक र शारीरिक थकानको अनुभव गर्छन्। यद्यपि तपाइँ कहिलेकाहीं तनावपूर्ण दिन वा निद्राको कमीको कारण थकित महसुस गर्न सक्नुहुन्छ, यो नोट गर्न महत्त्वपूर्ण छ कि यदि तपाइँ पुरानो थकानको अनुभव गर्दै हुनुहुन्छ भने कम टेस्टोस्टेरोन स्तर दोषी हुन सक्छ। यद्यपि, प्रतिस्थापन थेरापीले कम स्तरलाई सामान्यमा ल्याउन सक्छ, ऊर्जा र जोस बढाउन सक्छ। तपाईंले शक्तिशाली प्रभावहरू अनुभव गर्नुहुन्छ, तपाईंले त्यो कसरत सत्र वा गोल्फको राउन्डलाई कुनै समयमै "हो" भन्नुहुनेछ!
परिष्कृत यौन इच्छा र प्रदर्शन
यदि तपाइँ सामान्य सेक्स ड्राइभ भन्दा कम अनुभव गरिरहनुभएको छ भने, तपाइँ इष्टतम कामवासना पुन: प्राप्त गर्न टेस्टोस्टेरोन Isocaproate प्रतिस्थापन थेरापीमा हेर्न सक्नुहुन्छ। कम टेस्टोस्टेरोन स्तरले मानिसको यौन स्वास्थ्यमा विनाश गर्न सक्छ, जसले इच्छा कम गर्न र इरेक्टाइल डिसफंक्शन निम्त्याउँछ। The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism मा चित्रित गरिएको एक अध्ययनले कामवासना र टेस्टोस्टेरोन स्तरहरू बलियोसँग सम्बन्धित रहेको पत्ता लगाएको छ। खोजहरूले पत्ता लगायो कि कम यौन इच्छाको अनुभव गर्ने व्यक्तिहरूमा कम टेस्टोस्टेरोन हुने सम्भावना उच्च थियो। जब निम्न स्तरहरू सामान्यमा पुनर्स्थापित गरियो, पुरुषहरूले सुधारिएको यौन इच्छा र कार्य अनुभव गरे, उनीहरूलाई आफ्नो यौन जीवनलाई ट्रयाकमा फर्काउन अनुमति दिँदै!
मांसपेशी बल बढ्यो
हेर्दै मांसपेशी बनाउनुहोस् र आफ्नो शरीर को मूर्ति? यदि तपाइँ कम T संग बाँच्दै हुनुहुन्छ भने त्यो एक कठिन उपलब्धि हुन सक्छ। टेस्टोस्टेरोन Isocaproate ले मांसपेशी प्रोटिन संश्लेषणमा एक प्रमुख कारकको भूमिका खेल्छ, जसले वजन उठाउने र व्यायाम गर्दा मांसपेशीमा हुने क्षतिलाई मर्मत गर्दछ। शक्तिमा टेस्टोस्टेरोन आइसोकाप्रोएटको प्रभाव नाप्ने एउटा अध्ययनले पत्ता लगायो कि पुरुष हर्मोनको खुराक प्राप्त गरेपछि सबै नौ परीक्षण विषयहरूमा मांसपेशी जन औसत २०% ले बढेको छ। जब सही आहार र व्यायाम संग संयुक्त, तपाईं आफ्नो टेस्टोस्टेरोन स्तर पुनर्स्थापना पछि थप दुबला मांसपेशी निर्माण गर्न अपेक्षा गर्न सक्नुहुन्छ।
के तपाईलाई थाहा छ कि मांसपेशी बल बढेको अतिरिक्त, टेस्टोस्टेरोन Isocaproate ले पनि मद्दत गर्न सक्छ बोसो हानि? एक अध्ययनका अनुसार, रिप्लेसमेन्ट थेरापी प्राप्त गर्ने टेस्टोस्टेरोन आइसोकाप्रोएटको कमी भएका पुरुषहरूले कम्मरको परिधि र बीएमआई दुवै घटेको अनुभव गरे। यो सम्भवतः यो तथ्यको कारण हो कि मांसपेशीको मास र तन्तु भएका पुरुषहरूले आराम गर्दा पनि धेरै क्यालोरीहरू जलाउँछन्।
अधिक तौल वा मोटो भएका पुरुषहरूमा टेस्टोस्टेरोनको स्तर कम हुने सम्भावना बढी हुन्छ किनभने फ्याट सेलहरूले टेस्टोस्टेरोन आइसोकाप्रोएटलाई एस्ट्रोजेन (महिला सेक्स हर्मोन) मा परिणत गर्न सक्छ। यदि तपाईं उच्च तौलमा हुनुहुन्छ भने तपाईं कम T को बढ्दो जोखिममा हुनुहुन्छ, कम टेस्टोस्टेरोन एक योगदान कारक हो कि भनेर आफ्नो स्तर जाँच गर्न उत्तम हुन्छ।
अधिकतम मानसिक कार्य
टेस्टोस्टेरोन Isocaproate संज्ञानात्मक प्रदर्शन मा एक प्रमुख भूमिका खेल्छ। अनुसन्धानका अनुसार, टेस्टोस्टेरोन आइसोकाप्रोएट प्रतिस्थापनले गणितीय तर्क, मौखिक मेमोरी, र एकाग्रताका क्षेत्रमा मानसिक कार्य बढाएको छ। साथै, टेस्टोस्टेरोन आइसोकाप्रोएट थेरापीले बुढ्यौली पुरुषहरूमा डिमेन्सिया र अल्जाइमर रोगको जोखिम कम गर्न देखाएको छ। तसर्थ, तपाईको मस्तिष्क स्वास्थ्यको रक्षा गर्नको लागि तपाईको टेस्टोस्टेरोन स्तरलाई जाँचमा राख्नु महत्त्वपूर्ण छ।
तनाव राहत र मूड सुधार
टेस्टोस्टेरोन आइसोकाप्रोएटले पुरुषहरूलाई बढी आक्रामक र क्रोधित बनाउँछ भन्ने लोकप्रिय विश्वासको विपरीत, हर्मोनले वास्तवमा पुरुषहरूको मुड सुधार गर्छ। वैज्ञानिक अनुसन्धानका अनुसार, टेस्टोस्टेरोन आइसोकाप्रोएटले सकारात्मक भावना र मित्रतामा सुधार ल्याउने र चिडचिडापन, तनाव, रिस र घबराहटको भावनालाई कम गर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो। यो पनि सोचिएको छ कि टेस्टोस्टेरोन आइसोकाप्रोएट प्रतिस्थापन थेरापी सम्भावित रूपमा पुरुषहरूको लागि एन्टीडिप्रेसन्ट उपचारको रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ।
हृदयाघात, स्ट्रोक, र मृत्युको कम जोखिम
के तपाईलाई थाहा छ टेस्टोस्टेरोन Isocaproate पुरुषहरूमा मुटुको स्वास्थ्य सुधार गर्न सक्छ? माथि उल्लेख गरिए अनुसार, टेस्टोस्टेरोन Isocaproate रातो रक्त कोशिका उत्पादन मा एक महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। यी मुख्य कोशिकाहरूको कम स्तरले हृदय स्वास्थ्यलाई नकारात्मक रूपमा असर गर्न सक्छ, जसले हृदय स्वास्थ्य अवस्था र कोरोनरी धमनी रोग र हृदयघात जस्ता रोगहरूको विभिन्न प्रकारको जोखिम बढाउँछ।
सौभाग्यवश, वैज्ञानिक अध्ययनहरूले टेस्टोस्टेरोन आइसोकाप्रोएट रिप्लेसमेन्ट थेरापी प्रयोग गरेर निम्न स्तरहरू सामान्यमा फर्काउनको लागि यो जोखिम कम गर्ने प्रतिज्ञा देखाएको छ। वास्तवमा, 83,000 भन्दा बढी बिरामीहरूको युरोपियन हार्ट जर्नल अध्ययनले पत्ता लगायो कि टेस्टोस्टेरोन आइसोकाप्रोएट रिप्लेसमेन्ट थेरापी प्रयोग गरेर कम टेस्टोस्टेरोन पुनर्स्थापित भएका पुरुषहरूमा उपचार नगरिएका पुरुषहरूको तुलनामा हृदयघात, स्ट्रोक र मृत्युको जोखिम कम थियो। कम टेस्टोस्टेरोन स्तर प्रतिस्थापन एक लामो र स्वस्थ जीवन बाँच्न आवश्यक छ।
किन्न टेस्टोस्टेरोन आइकोप्रोट पाउडर
 हेन्स डब्ल्यूएम, एड। (२०११)। CRC ह्यान्डबुक अफ केमिस्ट्री र फिजिक्स (९२ औं संस्करण)। CRC प्रेस। p ३.३०४। ISBN 1-2011।
 Sapienza P, Zingales L, Maestripieri D (सेप्टेम्बर 2)। "वित्तीय जोखिम घृणा र क्यारियर छनौटहरूमा लिङ्ग भिन्नताहरू टेस्टोस्टेरोनबाट प्रभावित हुन्छन्"।
 के निषेधित छ।" विश्व एन्टी डोपिङ एजेन्सी। नोभेम्बर १२, २०२० मा मूलबाट अभिलेख गरिएको। जुलाई १८, २०२१ मा पुनःप्राप्त।
 राइट जे, एलिस एल, बीभर के (२००९)। अपराधको हस्तपुस्तिका सहसम्बन्धित छ। स्यान डिएगो: एकेडेमिक प्रेस। पृ. 4-2009। ISBN 208-10-978-0-12।
 Dabbs M, Dabbs JM (5)। नायकहरू, बदमाशहरू, र प्रेमीहरू: टेस्टोस्टेरोन र व्यवहार। न्यूयोर्क: म्याकग्रा-हिल। ISBN 2000-978-0-07-135739।